သရဲနီတို့အဝေးကွင်းနိုင်ပွဲမှတ်တမ်းသစ် နှင့်အတူ ဝက်ဟမ်း-မန်ယူပွဲအပြီး သုံးသပ်ချက်များ… – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အဝေးကွင်းပွဲစဉ်အဖြစ် ဝက်ဟမ်းအသင်းအိမ်ကွင်းမှာ သွားရောက်ကစားခဲ့ကာ ၁ – ၃ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်…အိမ်ကွင်း ရှုံးပွဲ ကျိန်စာမိနေသော်လည်း အဝေးကွင်း နိုင်ပွဲများဆက်တိုက်ရနေပြီး အဝေးကွင်း (၉) ပွဲဆက် အနိုင်ရရှိသော အသင်းတသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်….
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ဂိုးသမားဟန်ဒါဆန်.. မာရှယ် ကာဗာနီ ဂရင်းဝုဒ်တို့ တိုက်စစ်မှာထားပြီး ဗန်ဒါဘတ် ပေါ့ဘာ တော်မီနေးတို့က ကွင်းလယ် မှာအထိုင်ချကစားကာ နောက်တန်းမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း အဲလက်တဲစ် မက်ကွိုင်းယား လင်ဒီလော့ ဝက်ဆာကာတို့ဖြင့် ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်…..
ပထမပိုင်းမှာတော့ မန်ယူ တိုက်စစ်နဲ့ ကွင်းလယ်ဟာ ထင်သလောက်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘဲ ဝက်ဟမ်း အသင်းရဲ့ ကောင်တာပေါက်ချက်များကို အသည်းအသန်ကာကွယ်ရင်း နောက်တန်းအားနည်းမှုကနေ ပထမဆုံးဂိုးပေးလိုက်ရပါတယ်…..မန်ယူအသင်းဟာ ပထမတပိုင်းလုံး ဝက်ဟမ်းအသင်းရဲ့ နောက်ကနေလိုက်ကစားရင်း ကစားကွက်တည်မရဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်….
မာရှယ် ကာဗာနီ ဂရင်းဝုဒ်တို့တိုက်စစ်ကလည်း ထင်သလောက်မပေါက်ခဲ့ဘဲ….နောက်တန်း ဟာလည်း ဝက်ဟမ်းအသင်းရဲ့ ကောင်တာပေါက် တွဲလုံးများကို တောက်လျောက်ကာကွယ်ရင်း ပထမပိုင်းတပိုင်းလုံး နောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ရပါတယ်…….
ဒုတိယပိုင်း မှာ ကျနော် တို့ နည်းပြကြီးဆိုးရှားလ် ဟာမှန်ကန်တဲ့လူစားလဲမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်….. ဗန်ဒါဘတ် မာရှယ် ကာဗာနီတို့ကို ထုထုတ်ခါ ရတ်ဖို့ မာတာ ဘရူနိတို့ကို လူစားလဲကစားစေခဲ့ပါတယ်….ဒုတိယပိုင်းမှာ အဲ့လက်တဲစ် နဲ့ ရတ်ဖို့တို့တောင်ပံ ဟာတောက်လျောက်ဖိအားပေးကစားလာခဲ့ပါတယ်…..အဲ့ဒီနောက် ကွင်းလယ်ဟာလည်း ဘရူနိုပါလာတော့ တော်တော်လေးတောင့်လာကာ ပထမဆုံးချေပဂိုးကို ပေ့ါဘာကနေသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်…
တောက်လျောက်ဆိုသလိုဘဲ ရတ်ဖို့က နေပြီး တောင်ပံတိုက်စစ်တွဲလုံးတွေကနေ ဒုတိယအနိုင်ဂိုးနဲ့ တတိယအနိုင်ဂိုးတို့ ဂရင်းဝုဒ်ကနေ သွင်းယူရင်း မန်ယူ အဓိကကစားသမားစာရင်းမှာ ဘယ်သူတွေအရေးပါလဲဆိုတာကို ပြသခဲ့ပါတယ်….အသင်းမှာ ဘရူနို နဲ့ ရတ်ဖို့စ် မပါရင် တိုက်စစ်ဟာ လုံး၀ အသက်မဲ့စေမယ်ဆိုတာကို နည်းပြကြီးဆိုးရှားလ်ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ပွဲလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်…..